အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page 10 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း မေမေတို့ဂရုစိုက်ရမယ့် နည်းလမ်းများ
15.7.2017 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မျှတတဲ့ အစားအစာတွေကို နည်းနည်း နည်းနည်းနဲ့...
ချောကလက်စားသုံးခြင်းကြောင့် ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား?
13.7.2017 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အချိုဓာတ်လွန်ကဲသော အစားအစာ၊ ချောကလက်၊ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေကြောင့် ဝက်ခြံပေါက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ အထောက်အထားတွေမရှ...
3.6.2017 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. အရက်သောက်သုံးခြင်းကို လျှော့ချပါ။
အရက်သောက်သုံးခြင်းဟာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေနိုင်တာ...